Iikholeji ezingama-80 zikhokelela i-retrofit kits yokukhanyisa kwakhona China Manufacturer
Inkcazo:80W Retrofit Kits,Iikhi zeLed Light Retrofit,Led Retrofit for Lighting Recessed Lighting
Home > Imveliso > I-High Bay Retrofit LED > Iikholeji ezingama-80 zikhokelela i-retrofit kits yokukhanyisa kwakhona
Umzekelo No.: BB-YPD-023-80W
Iikiti zokubuyisela i- Led zibonelela ngeemitha eziyi-9600 kuma-watts angama-80 kunye ne-Lumen Efficacy ye-120 lm / W ukuze ithathe indawo ye-250W MH / HPS / HID yokukhanya kwendabuko, ngokugcina ngempumelelo u-80% wemali kwiimali zakho zamandla, ukukhanya kwelanga eli-5000K kukuqinisekisa namava okukhanyisa. I-retrofit eholele i-pizza highbay ine-b etter inkqubo yokupholisa idibene ne-aluminium yokufudumala ukufudumala kunye nesantya esiphezulu sokuqinisekisa ukuhamba kwexesha elide kunye nokushisa okuphantsi. Ngomlinganiselo wobomi obongezelelweyo obuninzi bamahora ama-50 000, i- 80W ikhokelela ukukhanya kwezibilini ze-retrofit zinewaranti engama-5.
1. Power Supply Brand Igama: MEANWELL
2. Iikhompiti ze-retrofit ezikhokelela kuma-80W Ukushisa komsebenzi: -20 ℃ ukuya kuma-40 ℃
3. I- Incandescent Equivalent: 250W MH / HPS / HID Light Bulbs
4. I- LED Retrofit Pizza I-Angel Angle: 100 °
5.Izicelo: IiNdlela eziPhezulu, iiNdawo zokuPaka iiMoto, oomasipala, ukuphuhliswa kwezentengiso, ii-Airports, izitalathisi zokuhlala, amaziko, izixhobo zamandla, izixhobo zokulungiswa kwezilwanyana, iiNkonzo zokugcina iiNkonzo kunye neeNgqungquthela.
Imizobo Yethu Imifanekiso:
I-Shenzhen Bbier Lighting ine-ISO9001: I-Standard Standard kunye neNkokeli yokuThuthukisa zonke iiNkqubo zoLondolozo lweMandla eziNgcono ze-LED IiLuminaires ze-United States I-Distributor ye-Wholesale (Importer) kunye neSolution Inkampani yokukhanyisa. Isiqhamo sesiphumo se-E40 (isiseko se-Mogul) kunye nesibane esingu-E27 (isiseko esiphakathi) seNkampani yokuLondoloza iGoza iGesi. Isixazululo sinceda umthengi wethu ukuba asebenzise iiUtilities. Imbuyiselo yesibane sethu sinesigunyaziso se-ETL kunye nesitifiketi se-DLC. Ngoko umthengi wethu unokufumana kalula izaphulelo zabo. Ukufika kweli nqanaba. I-Bbier ibe yindleko yokuvelisa isibane se-LED yezigidi ezingama-50 Ukuthumela kwi-US ne-EU yemakethe.
Sigxininisa ngakumbi kwiinkonzo Ngoko umveliso wethu unokusungulwa kwezixhobo zokuvelisa ngoku sidibanisa izixhobo, Ukumakisha umthengi womatshini we-LOGO. Umshini we-Samsung LED SMD, uhlaziye umshini wokukhenkcela kunye nokutshiza umatshini wokunamathela wokuhlanganisa unxibelelwano lwee-lamp machnes njl. Sinokwenza isibonelo somthengi wesibane .etc LOGO zonke iintlobo ze-LED kwisiphene kunye nezixhobo zokuvavanya.
150W I-LED High Bay Shop Izibane Izibane zokutshintsha Qhagamshelana Ngoku
80W Retrofit Kits Iikhi zeLed Light Retrofit Led Retrofit for Lighting Recessed Lighting ILed Retrofit Kits I-100W Led Retrofit Kit I-Led Retrofit Kit Troffer Retrofit Kits 120 Watt Led Retrofit Kit